यसकारण खस्छ पाठेघर | Nagarik News - Nepal Republic Media
यसकारण खस्छ पाठेघर
२८ पुस २०७५ १६ मिनेट पाठ
पाठेघर खस्न नदिन गर्भवती अवस्थाको अन्तिम तीन महिना आराम गर्नुपर्छ। सात महिना पार गरेपछि सावधानी अपनाउनुपर्छ। प्रसूतिपछि कम्तीमा डेढ महिना आराम गर्नुपर्छ। यस अवधिमा पेट कसिलो बनाउने सामान्य व्यायाम गर्नुपर्छ।
पाठेघर खस्ने समस्याले धेरै नेपाली महिला पीडित छन्। यसलाई बोलीचालीको भाषामा आङ खस्ने पनि भनिन्छ। आखिर पाठेघर खस्ने समस्या किन हुन्छ ? यो समस्या आउनै नदिन वा आइसकेपछि के गर्नुपर्छ ?
प्रस्तुत छ– यस विषयमा नागरिक दैनिककी पवित्रा सुनारले काठमाडौंको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका उपनिर्देशक डा. गेहनाथ बरालसँग गरेको संवादः
२७ वर्ष भइसक्यो। सेवाकै क्रममा देशका विभिन्न क्षेत्रमा सरुवा भएर पुगेको पुगेको छु। काठमाडौंसहित धादिङ, विराटनगर, पोखरा, भद्रपुर, भरतपुरलगायतका ठाउँमा गएर सेवा दिएको छ। स्वास्थ्य शिविरका क्रममा देशका पूर्वदेखि पश्चिम सम्मका सबै जिल्लामा पुगेको छु।
नेपालमा पाठेघर खस्ने समस्या कतिको छ ?
भयावह छ। पाठेघर खस्ने समस्या नभएका नेपाली महिला भेट्टाउन मुस्किल छ।
पाठेघर खस्ने भनेको खासमा के हो ?
शरीरका सबै अंगहरू हड्डी तथा तन्तुले अडिएका हुन्छन्। त्यसैगरी पाठेघर पनि तन्तुको भरमा अडिएको हुन्छ। पाठेघरदेखि तलको भागसम्म रहेको यो तन्तु बच्चा जन्मिने बेला तन्किन्छ। राम्रोसित प्रसूति नभएमा, बच्चा धेरै ठूलो भएमा, शल्यक्रिया नगरी बच्चा जन्माएमा, बच्चा जन्माउँदा लामो समय व्यथा लागेमा पाठेघर अड्याउने तन्तु कमजोर हुन्छ।
बच्चा जन्मिसकेपछि पनि पहिलाका तन्तुहरू विस्तारै आफ्नो पुरानै अवस्थामा फर्किन्छन्। यसका लागि सुत्केरीले आराम गर्ने, गह्रौं काम नगर्ने तथा पौष्टिक खाना खाने गर्नुपर्छ।
पाठेघर खसेर यो अस्पतालमा आउने बिरामी कति छन् ?
पहिलाको तुलनामा कम भएका छन्। कारण पछिल्लो समय पाठेघर खसेको उपचार स्थानीय स्तरमै एवं गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमै हुने गरेका छन्। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूले नै, खसेको पाठेघरमा रिङ पेसरी लगाइदिन्छन्। तसर्थ गम्भीर अवस्थाका बिरामी मात्र हामीकहाँ आउँछन्।
शल्यक्रिया गर्ने पर्ने अवस्थाका बिरामी कति आउँछन् ?
त्यस्ता बिरामीको यस अस्पतालमा दैनिक शल्यक्रिया भइरहेको हुन्छ। शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका बिरामी महिनामा ३० जनाभन्दा बढी आउँछन्।
शल्यक्रिया गर्न नपर्ने तर पाठेघर खसेका महिला चाहिँ कति आउँछन् ?
यसको एकिन तथ्यांक त छैन। अनुमानित दैनिक ५ देखि १० जनासम्म आउँछन्। तीमध्ये एकदेखि दुई जनासम्म शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्थाका हुन्छन्। शल्यक्रिया गर्न नपर्नेहरूलाई रिङ राखेर पठाउँछौ।
धेरैजसो ४५ देखि ५० वर्षसम्मका छन्। यद्यपि ४० देखि ६० वर्षसम्मकै महिलामा यो समस्या देखिन्छ। गाउँमा भएका स्वास्थ्य शिविरहरूमा जाँदा उक्त उमेरभन्दा कमका महिलामा पनि पाठेघर खस्ने समस्या पाइएको छ। गाउँतिर ३० वर्षकै उमेरमा पनि पाठेघर खस्ने समस्या भएको पाइन्छ। कारण के हो भने त्यहाँ यही उमेरभित्र तीनवटासम्म बच्चा पाइसकेका हुन्छन्। यसकारण पाठेघर खस्ने समस्या पनि सानै उमेरमा भएको हो।
भनेपछि पाठेघर खस्ने समस्याबाट पीडित महिला सहरमा भन्दा गाउँमा बढी छन् ?
हो, गाउँमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने चलन छ। सानै उमेरमा बच्चा पाउँछन्। सानैमा बिहे गर्ने कारण पढाइ पनि कम हुन्छ। परिवार नियोजनबारे जानकारी नहुँदा छिटो–छिटो(कम अवधि अन्तरमा)बच्चा पाउँछन्। आमा र शिशुको हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान पनि गाउँमा कम हुन्छ। गाउँमा बाटोघाटो पनि उस्तै हुन्छन्। उकालो–ओरालो हिँड्नुपर्छ। गह्रौं भारी बोक्नुपर्छ। भनेकै बेला अस्पताल पनि जान पाइँदैन। यस कारण दुर्गम गाउँका महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या बढी हुन्छ। गाउँको तुलनामा सहरमा अस्पताल लगायतका सुविधा हुने भएकाले यहाँ यो समस्या कम हुने गरेको हो।
नेपालमा पाठेघर खस्ने समस्या देखिनाको मुख्य कारण के हो ?
शिक्षा नभएका र विपन्न वर्गका महिला यसमा बढी पर्छन् होला ?
हो, धेरैजसो विपन्न र अशिक्षित महिला यो समस्याको चपेटामा बढी परिरहेका छन्। किनकि उनीहरूमा रोग र स्वास्थ्यबारे जानकारी कम हुन्छ। उनीहरू पाठेघर दुई डिग्रीभन्दा बढी तल झरेपछि मात्र उपचारमा आउने गरेको पाइन्छ।
पाठेघर खसेपछि कस्ता लक्षण देखापर्छन् ?
पाठेघर खसिहाल्यो भने थप नखोस् भन्नाका लागि कुनै उपाय छ कि ?
पाठेघर खस्ने समस्या उपचारका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ त ?
पाठेघरको निःशुल्क शल्यक्रियाको व्यवस्था सरकारले गरेको छ। शल्यक्रिया गर्न आउनेलाई सरकारले यातायात खर्चसमेत दिने गरेको छ।
पाठेघर खस्नै नदिने उपाय के छ ?
सुत्केरीपछि पाठेघरका तन्तु पहिलेकै अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्छ ?
सुत्केरीका बेला खोक्दा पनि पाठेघर खस्छ भन्छन् नि ?
पाठेघर तथा मलद्वारको उपचार भनेको कस्तो हुन्छ ?
अन्य होसियारी अपनाउनुपर्ने के छन् ?
लामो व्यथा लाग्न नदिने, यस्तो अवस्था आयो कि आएन भन्ने जान्न तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय स्तरमै हुनुपर्‍यो। यदि नजिकका स्वास्थ्य संस्थामा यो सुविधा छैन भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले ध्यान दिनुपर्‍यो। नजिकै स्वास्थ्य संस्था नभएका ठाउँमा स्थानीय शिक्षक, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जनप्रतिनिधि मिलेर प्रसूति कोष खडा गर्नुपर्छ र गर्भवतीलाई सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ। यो दायित्व सिंगो समाजको हो।
पाठेघर गर्भवती पेट गर्भपतन